(SAWIRRO): Shirweynihii Horumarinta Warbaahinta Qaranka oo lagu soo gebagebeeyey Muqdisho – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Soomaaliya iyo Itoobiya oo ka wada hadlay iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo amniga
Wasiirka Amniga “Sahayda iyo Saanadda Ciidanka la geeyay Baladweyne Cid gaar ah ayaa bixisay”
Sweden oo Soomaaliya ka taageeraysa sare u qaadista adeegyada Cadaaladda
Dhageyso:- Barnamijka Wareegga Wararka 24-Ka Saac Ee Radio Dalsan 27/1/2022
Dhageyso:- Warka Habeen Ee Radio Dalsan 27/1/2022
Wasiirrada Arrimaha Dibadda Somalia iyo Rwanda oo ka wada hadlay iskaashiga labada Dal
Xukuumadda oo Amartay in si Degdeg dib loogu soo celiyo Ciidankii la geeyay Baladweyne
Akhriso:-Guddiga Xallinta Khilaafaadka oo hakiyey Natiijada Doorashada saddex kursi
Mareykanka & Shiinaha oo wada-hadal ka yeeshay xiisadda Ukraine iyo Ruushka
Dhageyso:-Warka Duhurnimo Ee Radio Dalsan 27/1/2022
(SAWIRRO): Shirweynihii Horumarinta Warbaahinta Qaranka oo lagu soo gebagebeeyey Muqdisho
Wasiirrada Wasaaradaha Warfaafinta ee Dawlada Federaalka ee Soomaaliya iyo Dawlad Goboleedyada xubnaha ka ah Dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya oo ay la jiraan inta badan ururadda ay ku mideysan yihiin weriyayaasha iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay Hoteel City Palace ee magaalada Muqdisho 24 – 25 Nofeembar 2015, waxaana shir guddoominayey Wasiirka Warfaafnta, Dhaqanka iyo Dalxiiska, Dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Shirka waxaa ka soo qaybgalay Wasiiradda Warfaafinta ee heer Federaal iyo Wasiiradda Warfaafinta Dawlad goboleedyada ay ka mid yihiin Wasiirka Warfaafinta Jubbaland, Mudane Cabdinuur Cali Aadan, Wasiirka Warfaafinta Koonfur Galbeed, Mudane Xasan Cabdi Maxamud, Wasiirka Warfaafinta Galmudug, Mudane Maxamed Aadan Cismaan iyo Wafdi uu hogaaminayo Afhayeenka Madaxtooyada Puntland Mudane Cabdilaahi Maxamed Jaamac (Quraanjecel). Kulanka waxaa sidoo kale ka soo qayb galay Wakiillo ka socda Gobollada Banadir, Hiiraan iyo Sh/dhexe, Wakiilo ka socda ururrada ay ku mideysan yihiin weriyayaasha iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya, Dawladdo iyo diblomaasiyiinta daneeya arrimaha Soomaaliya iyo ururadda iyo hay’adaha caalamiga ah ee taageera warbaahinta Soomaaliya.
Waxaa shirka taageeray xafiiska Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM (UNSOM) oo si xoog leh ula shaqeeyey Wasaarada Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska ee Dowladda Federaalka Soomaaliya. Ergeyga Gaarka ah ee XG ee QM, Nicholas Kay ayaa ka soo qeybgalay furitaanka shirka.
Go’aamada Shirka ka soo baxay:
Wasiiradu waxay isku afgartaan in ay shir dambe isugu soo noqdaan bisha December 2015 si ay u meel mariyaan qorshaha iyo istraatejiyada horumarinta Warbaahinta Soomaaliyeed ee shanta sano ee soo socoto oo hada gacanta lagu hayo.
Waxay Wasiiradu isla meel dhigeen in shacabka Soomaaliyeed loo qabto barnaamijyo wacyigelineed oo la xiirira amniga, wadaniyada, midnimadda iyo is aaminka ka dhexeeya shaqsiyaadka, degaamadda iyo beelaha Soomaaliyeed.
Wasiirradu waxay ugu baaqeen hay’adaha iyo urrurada taageera warbaahinta Soomaaliya ama ka shaqeeya arrimaha warbaahinta in ay iska diiwaangeliyaan Wasaaradda Warfaafinta ee heer Federaal iyo Wasaaradaha Warfaafinta ee dawlad goboleedyada ay ka hawlgalaan, isla markaasna u gudbiyaan qorsha hawleedkooda oo dhameystiran.
Wasiirradu waxay amaan iyo mahadcelin u jeediyeen dawladaha iyo hay’adaha taageera warbaahinta Soomaaliyeed waxayna ugu baaqeen in ay sii xoojiyaan taageeradooda xilligan warbaahinta Soomaaliyeed ay gelayso marxaladda cusub.
Waxay hoosta ka xarriiqeen in bahda warbaahinta oo is kaashanaysa ay sameyn karto wacyigelin bulsho oo beelaha iyo shacabka Soomaaliyeed ka saarta kala shakiga iyo isku kalsooni la’aanta ay ka dhaxleen dagaalladii sokeeye ee daba dheeraaday.
Waxay isla qiimeeyeen duruufaha ay ku shaqeeyaan weriyayaasha iyo guud ahaan warbaahinta Somaaliyeed, waxayna amaaneen horumarka lixaadka leh ee ay sameynayso warbaahinta Soomaaliyeed. Waxay xaqiijiyeen in dawladda Soomaaliya ay ka go’an tahay ilaalinta xorriyadda Saxaafadda iyo xoriyatul qowlka sida uu qabo qodobka 18-aad ee dastuurka KMG ah.
Wasiiradu waxey isla garteen in Xeerka Saxaafada ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ee hada horyaala golaha shacabka Soomaaliyeed dib loo dhigo ansixintiisa mudo 15 cisho ah si dawlad goboleedyadu fursad ugu helaan in ay soo dersaan sharciga.
Waxay isku waafaqeen wasiirradu muhimadda ay leedahay in Wasaaradaha Warfaafinta iyo dhamaan bahda warbaahinta dalku yeeshaan qorshe iyo istraatejiyad cad oo lagu taageerayo nabadda iyo xasiloonida dalka, lagulana dagaallamayo argagixisada iyo xagjirnimadda.
Wasiirradu waxay isku dhaafsadeen shirka warbixinno muhiim ah oo la xiriira xaaladda Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo Warfaafinta.
Wasiirradu waxey soo dhoweeyeen, una mahadceliyeen doorka xafiiska Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM oo taageeray shirkan muhiimka ah. Sidoo kale waxey u mahadceliyeen doorka hay’adaha IMS iyo Fojo ee ku aadan diyaarinta barnaamijka, qorshaha istraatejiyada warbaahinta iyo soo ururinta macluumaadka muhiimka ah kadib booqashooyinkii ay ku kala bixiyeen gobollada dalka si loo ogaado baahiyaha iyo dhibaatooyinka haysta warbaahinta ka hawl gasha dawlad goboleedyada iyo sidii loo hormarin lahaa.
Wasiirradu waxay ku heshiiyeen inay yeeshaan wadashaqeyn buuxda oo dhan walba ah sida diiwaangelinta hay’adaha warbaahinta ka howlgala dalka, sharci siinta hay’adahaas, iyo inay xiriir wanaagsan ka yeeshaan arrimaha deegaan walba ku soo kordha.
Wasiiradu waxey isla garteen in marka la ansixiyo xeerka Saxaafadda laga wada shaqeeyo dhaqangelintiisa iyadoo golaha Warbaahinta Qaranka ee la dhisi doono ay xubno ku yeelan doonaan Dawlad Goboleedyadu si goluhu u wajaho cabashooyinka iyo anshax marinta shaqsiyaadka ama hay’adaha warbaahinta ee ku xadgudba xeerkaas ama anshaxa iyo asluubta warbaahinta.
Wasiirradu waxa ay isla meel dhigeen in si hawlgallada ciidan iyo horumarka dalka ka socda uu u guulaysto, nabadda iyo xasilloonida Soomaaliyana ay u noqoto mid joogto ah in loo baahan yahay in dowladda Federaalka iyo dawlad goboleedyada oo is kaashanaya ay sameeyaan wacyigelin bulsho iyo dib u heshiisiin buuxda oo la dhexdhigo beelaha Soomaaliyeed iyo qaybaha bulshada ee wax kala tirsanaya.
Wax ay cambaareeyeen ficillada dilka, xariga aan sharciga aheyn iyo hanjabaadaha ah ay kooxaha argagixisada ah iyo sharwadayaal kaleba ay ku hayaan weriyayaasha iyo warbaahinta Soomaaliyeed, waxayna ciidamada amniga ugu baaqeen in ay gacanta ku soo dhigaan dembiilayaasha oo ay sharciga hor keenaan.
Waxay si wadajir ah isagu raaceen in hay’adaha saxaafadda taageera ee caalamiga ah ee magaca warbaahinta Soomaaliya deeq bixiyeyaasha lacagaha uga soo qaata ay barnaamijyadooda u soo gudbiyaan Wasaaradaha Warfaafinta ee heer Federaal iyo heer dawlad goboleed si looga hortago in barnaamijyo isku mid ah ay wada saameeyaan oo aan ka tarjumeynin baahida warbaahinta.
Waxay wasiirradu isla meel dhigeen in shacabka Soomaaliyeed uu u baahan yahay wacyigelin la xiriirta barashada dhinacyada Dastuurka, nidaamka Federaalka iyo doorashooyinka, loona baahan yahay in Wasaaradaha Warfaafinta ee heer Federaal iyo dawlad goboleedyada la yimaadaan qorshe mideysan oo ay ku wacyigelinayaan bulshada Soomaaliyeed.
Wasiiradu waxay bogaadiyeen hawlgaladda amni iyo guulaha ay ka soo hoynayaan dhamaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, waxayna ugu baaqaan in ay soo afjaraan ciribtirka UGUS iyo kooxaha nabad diidka ah ee doonaya in ay gabaad ka dhigtaan Soomaaliya.
Wasiiradu waxay ugu baaqeen Dawladaha, hay’adaha iyo ururada taageera warbaahinta Soomaaliyeed in ay xoojiyaan isla markaana joogteeyaan taageerada ay siinayaan qorshayaasha ay Wasaaraduhu wadaan oo si siman dalka oo dhan looga hirgelin doono.
Webmaster 18081 posts 0 comments
Ruuxi Raxman: “Diinta Islaamka waa Diin Nabadeed, xitaa lama oggolo in la dilo quraanjo”
Madaxweynaha: ‘’Ciidammada Miina Baarka Booliska waxay qeyb weyn ka qaataan sugidda amniga dalka’’
Wasiirka Amniga “Sahayda iyo Saanadda Ciidanka la geeyay Baladweyne Cid gaar ah ayaa…
Wasiirrada Arrimaha Dibadda Somalia iyo Rwanda oo ka wada hadlay iskaashiga labada…